सरकारमा अल्झिरहने अवस्था अब छैन (अन्तरवार्ता) | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » सरकारमा अल्झिरहने अवस्था अब छैन (अन्तरवार्ता)
सरकारमा अल्झिरहने अवस्था अब छैन (अन्तरवार्ता)
महासचिव एवं संघीय सांसद, समाजवादी पार्टी
राजपा नेपालकै कारण केही ढिलाई भएको हो
मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गरी विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल अहिले समाजवादी पार्टी बनेको छ । फोरम नेपाल अर्थात समाजवादी पार्टीले लिएको मिसन, एजेण्डा अधुरो र अपुरो छ । मुद्दा उठान गरेर आन्दोलनको शुरुवात गरेका तत्कालिन फोरम नेपाल (अहिलेका समाजवादी पार्टी) प्रति नै सबैको आशा र भरोसा छ । राम्रो गरे उसैलाई जस जान्छ नराम्रो गरे उसैलाई अपजस जान्छ । अरु दल पछाडि पछाडि हिड्ने मात्र हो । तर पछिल्लो समय समाजवादी पार्टी पनि रन्नभुल्लमा परेको टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । समाजवादी पार्टीले प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व गरेको छ भने संघीय सरकारको एउटा हिस्सा बनेको छ । सत्तामा अल्झियो कि केमा अल्झियो, समाजवादी पार्टीमा अहिले के भइरहेको छ लगायतका विषयमा पार्टीका संघीय सांसद तथा महासचिव एवं पार्टी एकताका लािग बनेको वार्ता समितिका सदस्य रामसहाय यादवसँग सहारा टाइम्सले गरेको छोटो कुराकानीः
समाजवादी पार्टी अहिले चुपचाप र शान्त छ, किन यस्तो ?
–पार्टी आफ्ना सम्पूर्ण नियमति कामहरु गरि नै रहेको छ । पार्टीको गतिविधिमा नियमित बैठकहरु बस्नु, कार्यकर्तालाई कामका लागि निर्देशन गर्नु, सरकारसँग सम्बन्धित कामहरु गर्नु जस्ता कामहरु भइ नै रहेका छन् । समाजवादी पार्टी चुपचाप र शान्त छैन । अलिकति यो बीचमा गतिविधि कम भएको कुरा तपाईलाई लागेको होला । स्वभाविक पनि हो, दशैं तिहारले सबै कुरालाई प्रभाव पारे जस्तै राजनीतिलाई पनि प्रभाव परेको हुन्छ त्यही भएर केही शान्त जस्तो देखिएको छ । तर चाडपर्वमा पनि पार्टीका नियमित कामहरु कहिले रोकिएन । अरु दलभन्दा समाजवादी पार्टी बढी नै गतिविधि गरिरहेका छन् । बैशाखमा नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीच एकीकरण भएको थियो, छ महिना नपुग्दै समायोजनका कामहरु अन्तिमचरणमा पुर्याएका छौं । पार्टीले दिनरात काम गरेर नै त्यो सम्भव भएको हो । त्यसैले समाजवादी पार्टी शान्त छैन जागरुक र क्रियाशिल छ ।
यो त पार्टीको आन्तरिक काम भयो । तर, तपाईहरुको जुन मिसन छ, सविधान संशोधन, पार्टी एकता, महाधिवेशन जस्ता कुरामा समाजवादी पार्टी गौण देखिएको छ किन ?
–पार्टी एकता र समायोजनको काम सकिएपछि हामी महाधिवेशनमा जाने कुरा भएको छ । पार्टी एकीकरणपछि जुन समायोजनहरु भइरहेको छ त्यो एक प्रकारको महाधिवेशनको तयारी नै हो । समायोजन पूर्ण टुगों नलागेको कारण महाधिवेशन सारिएको हो । पार्टीभित्रको समायोजन र राजपा नेपालसँगको एकता प्रकृया टुगों लाग्ने बित्तिकै एकताको पहिलो महाधिवेशनको मिति घोषणा हुन्छ । रह्यो सविधान संशोधनको कुरा । यसका लागि पार्टीले सरकारसँग आन्तरिक रुपमा कुराकानी गरिरहेको छ । सविधान संशोधन गराउनैका लागि पार्टी सरकारमा गएको कुरा सही हो । पार्टीले त्यस अनुसारको दवाव सरकारलाई दिइरहेको पनि छ । यदि अब पनि भएन भने हामी त्यसको विकल्प खोज्छौं ।
विकल्प खोज्छौं भनेको के हो ?
–हामीले जे भनेर सरकारमा गएका थियौं । नेकपाकालाई जे भनेर समर्थन गरेका थियौं त्यसमा हामी पुनः विचार गर्न सक्छौं । हामीले जनतालाई जवाफ पनि दिनुपर्छ । जुन जनताको मत लिएर हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौं, उनीहरुकै जनमत अनुसार सम्झौता गरेर सरकारमा सहभागि पनि भएका हौं । यदि सरकारले त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गरेन भने त्यहाँ बसिरहनुको अर्थ रहँदैन । पहिलो चरणमा हामील्े सरकारलाई अल्टिमेटम दिन्छौं र त्यो अल्टिमेटममा पनि काम भएन भने एउटा निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौं ।
यस्तो रेडिमेड कुरा शुन्य समयदेखि अर्थात शुरुदेखि नै भन्दै आउनु भएको छ यो कुरा भनेको पनि एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो यी कुरा गरेर जनतालाई कहिल्यैसम्म भुलाउनु हुन्छ ?
–अब यो कुरा धेरैदिनसम्म भनिरहनु पर्ने अवस्था छैन । चाडपर्व सकेपछि सरकारसँग हामीले गम्भीर रुपमा कुरा गर्छौ । त्यसपछि पनि सरकारले स्पष्ट रुपमा आफ्नो जवाफ दिएन भने हामी सरकारबाट अलग हुन बाध्य हुन्छौं । अर्थात सविधान संशोधनको कुरालाई अगाडि बढाएन भने त्यहाँ कुरेर बस्ने अवस्था रहदैन । जुनदिन सरकारमा रहनुको औचित्य छैन भनि थाह पाउँछौं त्यही दिन निस्केर हिड्छौं । त्यसका लागि बार वा मिति तोकि रहनु पर्दैन । अहिले चाडपर्व भएको कारण अलि ध्यान नगएको देखिन्छ । चाडपर्व सकिएपछि हामी एक्सनमा जान्छौं ।
तपाईले अघि भन्नुभएको थियो कि राजपा नेपालसँग एकताको टुगों लागेपछि महाधिवेशनमा जान्छौं के राजपा नेपालसँग एकीकरण भएन भने तपाईहरुको पार्टीको महाधिवेशन हुँदैन ?
–त्यस्तो होइन, महाधिवेशनमा अलि ढिलाई हुनुको कारणमध्ये त्यो पनि एउटा कारण हो भनेको मात्र हुँ । राजपा नेपालसँग एकीकरण नै भएन भने महाधिवेशन पनि नहुने कुरा हुँदैन । राजपा नेपालसँग एकीकरण भएन भने केही न केही कुरा त आउँछ नि । सधै यस्तै रही रहदैन । कुनै निष्कर्षमा पुगेर यसलाई टुग्यांउनुपर्छ । हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन नियमित प्रकृया हो । सोही प्रकृया अनुसार महाधिवेशन हुन्छ ।
खासमा राजपा नेपालसँग हालसम्म एकीकरण हुन नसक्नुमा दोषी को छ, समाजवादी पार्टी कि राजपा नेपाल ?
–ढिलाइ हुनुको कारण राजपा नेपाल नै हो । राजपा नेपालमा छजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ । ती छजना अध्यक्षको बीचमा नै एकमत छैन जस्तो लाग्छ हामीलाई । अनौपचारिक कुराहरु हुन्छ, मिले मिलेको जस्तो हुन्छ । फेरि उहाँहरुको बीचमा केही कुरा मिलेको हुँदैन अनि कुरा विग्रिन्छ । राजपा नेपालले एकता नचाहेको पनि होइन । राजपा नेपालका नेताहरु पनि एकताप्रति प्रतिवद्ध देखिनुहुन्छ, तर कता कता के के नमिलेको जस्तो देखिन्छ । जनताको म्याण्डेट नै राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण होस् । त्यसबाट राजपा नेपाल वा समाजवादी पार्टी भाग्न मिल्दैन । तर राजपा नेपालकै कारण केही ढिलाई भएको हो जस्तो लाग्छ । यद्यपी एकीकरण हुन्छ केही समय लाग्छ त्यो छुट्टै कुरा हो तर एकीकरण हुन्छ ।
तपाईले भन्नुभयो राजपा नेपालका कारण ढिलाई भइरहेको छ, त्यो दलको चाहना के हो के भन्नुहुन्छ राजपा नेपालका नेताहरुले ?
–पार्टीका नाम, झण्डा, उद्देश्य लगायतका सबै कुरा उठेको छ । ती सबै विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यस कारणले पनि एकता प्रकृया लम्बिएको हो । पार्टीमा नेता व्यवस्थापन, पार्टीको संरचना लगायतका सबै विषयमा अनौपचारिक रुपमा नेताहरुको बीचमा छलफल चलिरहेको छ ।
यी विषयहरुमा राजपा नेपालको धारणा कस्तो आइरहेको छ ?
–धारणा सकारात्मक नै हो तर उहाँहरुको बीचमा आपसी समझदारीमा ढिलाई भएको हो । उहाँहरुले आफू आफूमा कुरा गरेर चाँडै नै यी कुरा टुगों लगाउँदा राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । तर कुरा जेजस्तो भएपनि एकताको प्रकृया सकारात्मक रुपमा अगाडि बढी रहेको छ । राजपा नेपालका नेताहरुले पनि नियमित छलफल गरिरहनु भएको छ । चाँडै कुनै नकुनै निष्कर्ष निस्किन्छ भनि विश्वास छ ।
हालै, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण भएको छ, त्यो भ्रमणको बारेमा पार्टीको बुझाई र धारणा कस्तो रह्यो ?
–नेपाल र चीनको बीचमा जुन सम्बन्ध थियो, यो भ्रमणले त्यो सम्बन्धmलाई झन उचाईमा पुर्याएको छ । भ्रमणलाई हाम्रो पार्टीले निकै सकारात्मक रुपमा लिएको छ । यो भ्रमणले देशमा विकासका सम्भावनाका बाटाहरु खोलेका छन् । भ्रमणलाई ऐतिहासिक रुपमा लिनुपर्छ । लामो समयपछि भएको यो भ्रमणले त्यतिकै महत्व पाएको छ । र, नेपाल आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि जुन पाइला चालेको छ त्यसका लागि भ्रमण झन महत्वपूर्ण भएको छ । नेपालले विकास निर्माणका लागि जुन अपेक्षा लिएको थियो, त्यसका लागि यो भ्रमणले आशाका किरण देखाएको छ । त्यसैले यस भ्रमणलाई सफल नै मान्नुपर्छ । तर थोरै त्रुटी कहाँ भयो भने नेपालका जुन पिछडा समुदाय छन्, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, पिछडा वर्ग लगायतलाई पनि राष्ट्रपति सीले सम्बोधन गर्नुभएन । सबैलाई सम्बोधन गरेको भए, भेटघाट र छलफल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । नेपालमा मधेशीको समस्या छ, थारु आदिवासी जनजातिको समस्या छ, पिछडा वर्गको समस्या छ, यदि यी कुराहरु राष्ट्रपति सीले भ्रमणको क्रममा थाह पाउनु भएको भए अगामी दिनमा विकास निर्माणमा वा नीति निर्माणमा कुनै प्रकारको सहयोग वा सुझाव दिँदा यी कुरामा ध्यान दिनु हुन्थ्यो तर त्यो भएन । यदि यो कलस्टरसँग कुरा भएको भए सरकारसँग चीनले गरेको २० बुँदे सम्झौतामा त्यो पनि कतै नकतै सम्बोधन हुन्थ्यो तर कहाँबाट यो त्रुटी भयो थाह भएन । नेपाल सरकारले चासो दिएन कि चीनले नै भेट्न चाहेन त्यो पनि थाह भएन ।
मधेशवादी दल वा अन्य पिछडिएका समुदायसँग राष्ट्रपति सीले कुरा किन गर्नुभएन जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–किन गर्नुभएन त्यो त मलाई थाह भएन । तर सबैसँग कुरा गर्दा राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई । भ्रमण यो भन्दा झन राम्रो फलदायी हुन्थ्यो । भ्रमणले पूरै नेपालको सम्बोधन गरेको अनुभूति हुन्थ्यो तर त्यसमा ध्यान दिएको कतैबाट देखिएन ।
भनिन्छ, समाजवादी पार्टी चीनसँग नजिक छ रे । तैपनि राष्ट्रपति सीले समाजवादी पार्टीसँग किन छलफल गर्नुभएन त ?
–भन्नलाई त जे पनि भन्छन् । समाजवादी पार्टी न चीनसँग नजिक छ न भारतसँग नजिक छ । दुवै देशसँग छिमेकीको नाताले समदुरीको सम्बन्ध बनाएको छ । नेपाल, भारत र चीनबीचमा राम्रो सम्बन्ध रहोस् भनि चाहना समाजवादी पार्टीले राखेको छ । यी तीनटै देशको बीचमा राम्रो सम्बन्ध रह्यो भने मात्र एक अर्कालाई कल्याण हुन्छ । त्यसमा पनि चीन र भारतबीच सम्बन्ध राम्रो हुनै पर्छ । चीन र भारतबीचमा राम्रो सम्बन्ध भयो भने त्यसको सबभन्दा बढी फाइदा नेपाललाई हुन्छ । यदि दुवै देशको बीचमा द्धन्द छ भने सबभन्दा बढी घाटा नेपाललाई हुन्छ । यो कुरा समाजवादी पार्टीले राम्रो सँग बुझेको छ र सोही अनुसार दुवै देशसँग सम्बन्ध बनाएको छ । हामीले कसैसँग नजिक र कसैसँग दुरीको सम्बन्ध बनाएका छैनौं । समदुरीको सम्बन्ध छ । दुवै देशसँग समाजवादी पार्टीको राम्रै सम्बन्ध छ ।